Ankizivavy maro no miandry androany amin'ny tsy faharetana. Ho an'ny maro, ny fahazoana mahafantatra ny ray aman-dreny dia ny zava-dehibe indrindra amin'ny fifandraisana. Na izany na tsy izany, raha manapa-kevitra ny hanao dingana toy izany ny mpifankatia iray, dia maneho fa ny fifandraisanao dia nahatratra ny fahamatorana. Izany hoe, mahafantatra fa manana drafitra matotra ho anao izy.
Andeha hojerentsika ireo olana goavana ireo: ahoana no tokony hahafantarana voalohany ny ray aman-drenin'ilay lehilahy, ny fomba tokony hitondran'ny zatovovavy azy, sns. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fanehoana tsara ny ray aman-dreniny voalohany. Ary, araka ny fantatrao, ny fahitana voalohany dia ny fanalahidin'ny fahombiazanao amin'ny ho avy.
Ankamantatra amin'ny ray aman-drenin'ilay zaza - ireo toro-hevitra fototra
1. Tadidio fa ny ankamaroan'ny ezaka ataonao dia tokony hiantefa amin'ny laingan'ny reniny malalany. Tsy isalasalana, ny ra lehibe indrindra ao amin'ny fianakaviana. Saingy amin'ny toe-javatra maro, ny heviny momba ny vinantovaviny dia mifototra amin'ny eritreritry ny vadiny momba azy.
Hadinoy ny hevitra hoe tokony hanome fanomezana amin'ny fahatsiarovana ny ray aman-dreny. Raha ny renin'ny olon-tianao no karazana olona miavaka indrindra, dia amin'ny fanomezana toy izany dia tsy hahita na inona na inona afa-tsy ny kolikoly avy aminao ihany. Ho vokatr'izany, mandritra ny fivoriana iray manontolo, dia hanomboka hitady ireo fahadisoana ireo aminao izy, izay, araka ny heviny, dia nanandrana nanidy tamin'ny fanomezana ianao.
2. Ny antony faharoa tokony tsy hanomezanao zavatra ho an'ny ray aman-dreniny dia tsy azonao atao ny mampifaly ny faniriany. Ary, amin'ny farany, ho voampanga amin'ny tsy fahampian'ny tsiro ianao, na amin'ny fiezahana hameno ny volanao.
Ny fanomezam-pahasoavana dia nomena tsara raha eo akaikin'ny fianakaviany ianao ary ho afaka hamantatra mora foana ireo fanomezam-pahasoavana izay ho tonga avy hatrany.
3. Raha vao miditra ao amin'ny tokantrano misy azy ianao, dia tsy hanjavona avy hatrany ny tsiky avy amin'ny molotrao. Na dia mihaona aminy aza izy ireo, dia miezaha ho namana. Matetika dia tadidio fa ny tsikinao dia nanampy anao hanintona ny malalanao amin'ny daty voalohany. Tsy voatery, amin'ny trangan'ny fitsidihana voalohany amin'ny ray aman-dreniny, ny tsiky dia hanampy amin'ny fanafenana ny henatra amin'ny mason'ny reniny.
4. Fitiavana ilay tovovavy miaraka amin'ny ray aman-drenin'ilay zazalahy, izay mety tsy hanao izany raha tsy misy fety. Aza manendrikendrika ny tapa-kazo amin'ny fampiasana solomaso divay. Aza hadinoina ny mikarakara ny latabatry ny olona tianao. Noho izany dia hanome Fantany ny reniny fa tsy havelany hiankina amin'ny tanany izy.
5. Rehefa mamaly fanontaniana mikasika ny drafitrao momba ny fiainana ianao, dia manandrama valiny toy izany, izay mety ho lohahevitra tsara ho an'ny tombontsoan'ny olon-tianao.
6. Raha anontaniana momba ny fianakavianao ianao, na inona na inona, dia farito izany fa toy ny hoe tsara indrindra eran-tany izany.
Ny zavatra tena manan-danja tokony hotsaroana dia rehefa mandeha any amin'ny fivoriana iray manan-danja toy izany ianao, dia mitondrà ny maha-voajanahary anao, manadino ny avonavona sy ny tsy fahampian-tsakafo ao an-trano, ary avy eo dia mahasoa anao ny fahombiazan'ny fifankahazoana.
Mianatra amin'ny lehilahy
Ahoana no handaminana takarivam-pifaliana iray ho an'ny vadiny?
Ahoana ny fahatakarana fa nisy lehilahy iray nantsoina - famantarana
Ahoana no hianaranao ho sambatra?
Ohatrinona ny manentana lehilahy?
Lehilahy manipulateur amin'ny fifandraisana sy ny famantarana
Fotsy hoditra marevaka
Mitsitsy ny jirokely amin'ny rambony
Manaova fofona maimbo
Karazana trano fisotroana
Zavamaniry misy ranomandry ho an'ny zaridaina
Famolavolana ny lalantsara ao amin'ny trano kely iray
Ara-dalàna ny fanadiovana
Elton John dia mipetraka ao Saint-Tropez miaraka amin'i David Furnish vadiny sy ireo ankizy
Omelety ho an'ny zaza iray taona iray
Zo mitovy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy